China abicah amaseviyethi izinkomishi ifektri abakhiqizi | SJJ
Wake wakucabanga ukuba nenkomishi ehlanzekile nenempilo ukuze uyiphuze kahle lapho uhamba izintaba, ukanisa, usohambweni lwebhizinisi, uphumela ngaphandle nemindeni yakho noma nabangane? Manje izinkomishi namabhodlela weSilicone asongekayo futhi aphathekayo enza lokhu kube ngokoqobo. Izinkomishi namabhodlela abicah zenziwa nge-sma ...
Wake wakucabanga ukuba nenkomishi ehlanzekile nenempilo ukuze uyiphuze kahle lapho uhamba izintaba, ukanisa, usohambweni lwebhizinisi, uphumela ngaphandle nemindeni yakho noma nabangane? Manje izinkomishi namabhodlela weSilicone asongekayo futhi aphathekayo enza lokhu kube ngokoqobo. Izinkomishi namabhodlela abicah kwenziwa ngosayizi omncane ngazo zonke izinhlobo zokunamathiselwe njengezintambo, imichilo, amasongo okhiye, amaketanga okhiye, izingwegwe nokunye, kulula ukufaka nezikhwama zakho noma emaphaketheni. Izinto ezenziwe ngo-silicone webanga lokudla ziphephile, izinkomishi namabhodlela abicah kuyasongwa kufakwe ezikhwameni noma emaphaketheni akho ukuze kugcinwe uhlangothi lwangaphakathi luhlanzekile futhi lunempilo. Imiklamo ingaba ubujamo nobukhulu obuhlukahlukene, ama-logo nemibala ehlukene yenza izinkomishi namabhodlela abicah athandeke, athandeke futhi ahehe. Kuyinto elula futhi enhle ukusebenzisa izinkomishi namabhodlela abicah kungakhathalekile ukuthi ungaphandle noma ngaphakathi. Izinkomishi namabhodlela abicah angamathuluzi empilo yakho yansuku zonke kanye nezinto ezinhle kakhulu zokukhushulwa, ibhizinisi, izipho, izikhumbuzo nokunye.
Izinto zokwakha: Izinto zebanga lokudla leSilicone (i-BRA ne-Phthalate mahhala)
Okunamathiselwe: Izintambo, Izintambo, amasongo okhiye, amaketanga okhiye, izingwegwe noma ukulandela ikhasimende
I-MOQ: ama-PC ayi-200 noma akhonjelwe kokunamathiselwe
Langaphambilini Amabhande Abicah
Olandelayo: Izinto Zekhishi LaseSilicone
Imisila yenkaba yebhodlela lamanzi
Isikebhe Sesikebhe Esibomvu sewayini elibomvu